Fampidirana ny Boky ao Amin’ny Baiboly | Video JW.ORG
Fampidirana ny Boky ao Amin’ny Baiboly
Video: Fampianaran’ny Baiboly Fampidirana ny Boky ao Amin’ny Baiboly
Misy video fohy maromaro ato. Hazavaina ao ny zava-nisy tamin’ny fotoana nanoratana ny boky ao amin’ny Baiboly sy izay raketin’ireo boky ireo. Azonao ampiasaina ireo video ireo rehefa mamaky sy mianatra Baiboly ianao.
ARAKARAKA NY Boky ao Amin’ny Baiboly Vaovao Tranainy
Fampidirana ny Bokin’ny Genesisy
Hazavaina ao amin’ny Genesisy hoe ahoana no niandohan’ny olombelona ary ahoana no nampisy ny fijaliana sy ny fahafatesana.
Fampidirana ny Bokin’ny Eksodosy
Nafahan’i Jehovah tamin’ny fanandevozana tany Ejipta ny Israelita, ary nataony lasa firenena voatokana ho azy.
Fampidirana ny Bokin’ny Levitikosy
Asongadina ao amin’ny bokin’ny Levitikosy hoe masina Andriamanitra ary tokony ho masina koa isika.
Fampidirana ny Bokin’ny Nomery
Resahina ao fa tena zava-dehibe ny mankatò an’i Jehovah sy manaja izay notendreny hitarika ny vahoakany.
Fampidirana ny Bokin’ny Deoteronomia
Hita amin’ny Lalàna nomen’i Jehovah ho an’ny Israelita hoe tena tiany ny vahoakany.
Fampidirana ny Bokin’i Nehemia
Misy lesona tsara be ho an’ny olona tia fivavahana ao amin’ny bokin’ i Nehemia.
Fampidirana ny Bokin’ny Salamo
Manohana ny zon’i Jehovah hitondra ny bokin’ny Salamo. Asongadiny koa fa manampy sy mampahery an’ireo tia azy i Jehovah, ary hanova an’izao tontolo izao ny Fanjakany.
Fampidirana ny Bokin’ny Ohabolana
Jereo ny tari-dalana avy amin’Andriamanitra momba ny fiainana andavanandro, ohatra momba ny varotra na momba ny fianakaviana.
Fampidirana ny Bokin’ny Mpitoriteny
Noresahin’i Solomona Mpanjaka hoe inona no tena zava-dehibe eo amin’ny fiainana. Noresahiny koa hoe ahoana no ahitana fa tsy manana fahendrena ny olona iray.
Fampidirana ny Tononkiran’i Solomona
Resahina hoe “lelafo avy amin’i Jah” ny fitiavan’ny tovovavy solemita an’ilay mpiandry ondry. Fa nahoana?
Fampidirana ny Bokin’i Isaia
Mirakitra faminaniana maro ny bokin’i Isaia. Efa tanteraka ny faminaniana sasany, ary azo antoka fa ho tanteraka koa ny hafa. Manome toky antsika izany fa tsy maintsy hotanterahin’i Jehovah daholo ny fampanantenany, ary hamonjy antsika izy.
Fampidirana ny Bokin’i Jeremia
Naminany foana i Jeremia na dia nisy nanohitra mafy aza. Tokony haka tahaka azy ny Kristianina.
Fampidirana ny Bokin’ny Fitomaniana
Nosoratan’i Jeremia mpaminany ny Fitomaniana. Nolazainy ao ny alahelony rehefa rava i Jerosalema. Noresahiny koa fa mamindra fo amin’izay mibebaka i Jehovah.
Fampidirana ny Bokin’i Ezekiela
Nanetry tena i Ezekiela sady be herim-po rehefa nanao izay rehetra nasain’i Jehovah nataony, na sarotra aza ilay izy. Ohatra tsara ho antsika izy.
Fampidirana ny Bokin’i Daniela
Tsy nivadika tamin’i Jehovah mihitsy i Daniela sy ireo namany. Mahasoa antsika velona amin’izao andro farany izao ny modelin’izy ireo sy ny faminaniana tanteraka.
Fampidirana ny Bokin’i Hosea
Misy lesona tsara be azontsika ianarana amin’ny faminanian’i Hosea, ohatra hoe tena mamindra fo amin’ny olona nanota nefa tena mibebaka i Jehovah. Hita amin’io koa hoe inona no karazana fanompoana ekeny.
Fampidirana ny Bokin’i Joela
Naminany momba ny “andron’i Jehovah” i Joela. Nilaza koa izy hoe inona no tokony hatao raha te ho voavonjy. Efa tena akaiky izao ny farany, araka ny faminaniany.
Fampidirana ny Bokin’i Amosa
Olona ambany saranga i Amosa nefa nofidin’i Jehovah hanao asa lehibe. Inona no azontsika ianarana avy amin’ny ohatr’i Amosa?
Fampidirana ny Bokin’i Obadia
Izy io ny boky fohy indrindra ao amin’ny Soratra Hebreo. Resahiny ao hoe ho voaporofo fa mendrika ny hitondra i Jehovah.
Fampidirana ny Bokin’i Jona
Nanaiky hahitsy ilay mpaminany, dia lasa nandeha nitory ihany. Nampianarina azy koa hoe maneho hatsaram-panahy feno fitiavana sy mamindra fo Andriamanitra. Tena manohina ny fo ny tantarany.
Fampidirana ny Bokin’i Mika
Rehefa mamaky an’io faminaniana io isika, dia matoky hoe tsy be loatra sady mahasoa ny zavatra asain’i Jehovah ataontsika.
Fampidirana ny Bokin’i Nahoma
Manome toky antsika ilay faminaniana hoe tanterahin’i Jehovah foana ny teniny, ary ampahereziny izay te ho sambatra sy te ho voavonjy rehefa mitondra ny Fanjakany.
Fampidirana ny Bokin’i Habakoka
Matoky isika fa hain’i Jehovah foana ny fotoana mety indrindra sy ny fomba tsara indrindra hamonjena ny vahoakany.
Fampidirana ny Bokin’i Zefania
Nahoana isika no tsy tokony hieritreritra hoe mbola ho ela ny andron’i Jehovah?
Fampidirana ny Bokin’i Hagay
Asongadina ao amin’io faminaniana io fa tena tokony hataontsika amin’ny toerana voalohany foana ny fanompoana an’Andriamanitra, izay isika vao manao an’izay tiantsika manokana.
Fampidirana ny Bokin’i Zakaria
Nampahery ny mpanompon’Andriamanitra fahiny ny fahitana sy faminaniana maro avy amin’Andriamanitra. Mbola mampahery antsika koa izy ireny, sady manome toky hoe hanampy antsika foana i Jehovah.
Fampidirana ny Bokin’i Malakia
Resahin’ilay faminaniana fa tsy miova mihitsy ny toro lalan’i Jehovah, mamindra fo izy, ary be fitiavana. Misy lesona tena ilaina amin’izao koa ao amin’ilay faminaniana.
Fampidirana ny Bokin’i Matio
Ho tianao ny hijery an’ireo lafiny mampiavaka an’io boky voalohany amin’ny Filazantsara io!
Fampidirana ny Bokin’i Marka
Ny bokin’i Marka no fohy indrindra amin’ny Filazantsara. Hita taratra ao hoe hanao ahoana ny fiainana rehefa hitondra ny tany i Jesosy.
Fampidirana ny Bokin’i Lioka
Inona ny fitantarana tsy hita afa-tsy ao amin’ny Filazantsaran’i Lioka?
Fampidirana ny Bokin’i Jaona
Notantarain’i Jaona fa tena tia ny olombelona i Jesosy, nanetry tena, ary izy no Mesia, ilay voatendry ho Mpanjakan’ny Fanjakan’Andriamanitra.
Fampidirana ny Bokin’ny Asan’ny Apostoly
Hanampy anao hazoto kokoa hitory sy hampianatra ny bokin’ny Asan’ny Apostoly. Tantaraina ao mantsy hoe modely ho antsika ny Kristianina voalohany satria niezaka mafy nampianatra olona avy tany amin’ny firenena rehetra.
Fampidirana ny Bokin’ny Romanina
Hita ao hoe tsy manavakavaka i Jehovah. Voalaza ao koa hoe nahoana isika no mila mino an’i Jesosy Kristy.
Fampidirana ny Bokin’ny 1 Korintianina
Resahin’i Paoly ao amin’ny taratasiny hoe inona no tokony hataontsika raha te hiray saina sy hadio fitondran-tena ary ho be fitiavana isika. Resahiny ao koa hoe mila mino isika hoe tena misy ny fitsanganana amin’ny maty.
Fampidirana ny Bokin’ny 2 Korintianina
Mampahery sy manohana ny mpanompony foana i Jehovah, ilay “Andriamanitry ny fampiononana rehetra.”
Fampidirana ny Bokin’ny Galatianina
Mbola mahasoa ny Kristianina hatramin’izao ny taratasy nosoratan’i Paoly ho an’ny Galatianina, satria manampy azy ireo tsy hivadika amin’Andriamanitra.
Fampidirana ny Bokin’ny Efesianina
Asongadina ao amin’ny taratasy ho an’ny Efesianina hoe nisy zavatra nataon’Andriamanitra mba hahatonga ny olona hihavana sy hiray saina. Tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy no nanaovany an’izany.
Fampidirana ny Bokin’ny Filipianina
Rehefa tsy mivadika isika na dia misy fitsapana aza, dia mandrisika ny hafa tsy hivadika koa.
Fampidirana ny Bokin’ny Kolosianina
Mampifaly an’i Jehovah isika raha mampihatra ny zavatra ianarantsika, mifamela heloka tanteraka, ary manaiky ny fahefan’i Jesosy.
Fampidirana ny Bokin’ny 1 Tesalonianina
Tokony hitandrina amin’izay zavatra mety hampihena ny finoantsika isika, ‘hamantatra tsara ny zava-drehetra’, ‘tsy hitsahatra hivavaka’, ary hifampahery.
Fampidirana ny Bokin’ny 2 Tesalonianina
Nahitsin’i Paoly ny hevi-diso nananan’ny Kristianina sasany momba ny andron’i Jehovah. Nampirisika azy ireo koa izy mba ho mafy orina ao amin’ny finoana.
Fampidirana ny Bokin’ny 1 Timoty
Noresahin’i Paoly ao amin’ny 1 Timoty ny fomba fiasa tokony harahina eo anivon’ny fiangonana. Nilaza koa izy fa ilaina ny mitandrina amin’ny fampianaran-diso sy ny fitiavam-bola.
Fampidirana ny Bokin’ny 2 Timoty
Nampirisihin’i Paoly i Timoty mba hanatanteraka tsara ny fanompoany.
Fampidirana ny Bokin’i Titosy
Ny olana tany amin’ny fiangonana tany Kreta sy ny fepetra takina amin’ny anti-panahy no resahina ao.
Fampidirana ny Bokin’i Filemona
Fohy ilay taratasy nefa mampirisika antsika mba hanetry tena sy ho tsara fanahy ary hamela heloka.
Fampidirana ny Bokin’ny Hebreo
Tsara lavitra noho ny tempoly sy ny sorona biby ny zavatra mampiavaka ny fivavahana kristianina.
Fampidirana ny Bokin’i Jakoba
Nanao fanoharana mora azo i Jakoba mba hanazavana hoe ahoana no tokony ho fomba fiainan’ny Kristianina.
Fampidirana ny Bokin’ny 1 Petera
Mandrisika antsika hiasa mafy sy hiresaka an’izay mampanahy antsika amin’Andriamanitra ny taratasy voalohany nosoratan’i Petera.
Fampidirana ny Bokin’ny 2 Petera
Mampirisika antsika ny taratasy faharoa nosoratan’i Petera mba tsy hivadika mihitsy mandra-pahatongan’ilay lanitra vaovao sy tany vaovao.
Fampidirana ny Bokin’ny 1 Jaona
Mampitandrina antsika amin’ny antikristy ny taratasin’i Jaona sady manampy antsika hahita hoe inona no tokony ho tiantsika sy tsy tiantsika.
Fampidirana ny Bokin’ny 2 Jaona
Mampahatsiahy antsika ny taratasy faharoa nosoratan’i Jaona hoe mila mandeha ao amin’ny fahamarinana foana isika ary mila mitandrina amin’ny mpamitaka.
Fampidirana ny Bokin’ny 3 Jaona
Mampianatra antsika mba ho tia mandray vahiny ny taratasy fahatelo nosoratan’i Jaona.
Fampidirana ny Bokin’i Joda
Resahin’i Joda hoe misy olona mitady hamitaka ny Kristianina sady mitady hitaona azy ireo hanao ratsy.
Fampidirana ny Bokin’ny Apokalypsy
Asehon’ny fahitana ao amin’ny Apokalypsy hoe hotanterahin’ny Fanjakan’Andriamanitra ny fikasany momba ny tany sy ny olombelona.
Hizara Hizara Fampidirana ny Boky ao Amin’ny Baiboly